Incwadi Sample ukwehlisa nezintela - ubungozi bokulahlekelwa egumbini noma ukuwina?
Business - kunobungozi. Ezimweni eziningi kwezamabhizinisi kusekelwe embonweni iqashwe ukusetshenziswa ngokuhweba noma ezimbonini. Kodwa emva kwesikhathi esithile, intengo kuba umthwalo - njengoba besho, futhi aphonse into edabukisayo, futhi sidonsa akunakwenzeka. Ikakhulukazi kushintsha njalo isimo sezomnotho ezweni, futhi kube nzima nakakhulu.
Into yokuqala ukuthi efika engqondweni yakho njalo eyisakhamuzi - ukunciphisa intela yemali ukuqasha isakhiwo. Empeleni, kwezinye izimo, izinyathelo kungasindisa isimo sezimali, kodwa into ebaluleke kakhulu - ukukwazi ukukholisa umninindlu.
Izindlela emzabalazweni zokunciphisa amanani sokuqasha
Okokuqala, umqashi kufanele ungacabangi ukuthi umnikazi yezakhiwo ezithintekayo efeni lakhe lalingenalutho. Umuntu akufanele alokothe indiva izinhlamvu umninindlu ukunciphisa iqashwe - le ndlela yezingxoxo kungaba nemiphumela engcono kunokuthi ingxoxo ngamazwi.
Akungabazeki ukuthi bonke abantu abahlala kulo muzi ngesikhathi ukusayina inkontileka umcabango kancane ukuthi maduze zingashintsha izimo futhi abangele ukungakwazi ukukhokhela kuthengiselana. Noma kunjalo, uphinde ufunde lonke inkontileka kungase nokho kukhona zinikezwa izimo eziyoba nomthelela umqashisi.
Guqula inkontileka lwemali
Uma Kusayinwa isivumelwano isikhathi eside futhi namagama yokukhokha okulingana izimali zakwamanye amazwe, kuleli cala, eyisakhamuzi kufanele enze wonke umzamo ukuya isilinganiso ruble.
Incwadi Sample ukwehlisa nezintela kulokhu izobukeka kanje:
"... izinkampani zethu kweminyaka eminingi esebenza futhi asikaze wephule imigomo yenkontileka, ngesikhathi ukukhokha irenti. Nokho, isimo sezomnotho ishintshile kakhulu, exchange rate ukwanda cishe nsuku zonke, futhi mayelana izinga lokushintshisana ngesikhathi sesiphelo sesimiso inkontileka lishintshelwe ___%. Lokuphakathi esitolo kuba ezingenanzuzo.
Ngokusekelwe engenhla, uyacelwa ukuthi ukhombe 3.2.8 ukuqasha ... ngeke ufunde kanje (ie, ushintsho inkontileka lwemali ruble) ... "
ongakhetha sokuqasha Enye
Qoqa ulwazi ngalokho ukubaluleka izakhiwo esifundeni. Mhlawumbe uthole ezimbalwa ongakhetha, ezifana egumbini elilodwa, elisetendeni sokuqasha yakho kanye nezindleko eziphansi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezimweni lapho ikontraga sidluliselwa isikhathi eside, futhi kungakho yokukhokha ukhuphuka unyaka ngamunye.
Incwadi isampula ucela ukwehla nezintela kulokhu zingenziwa kanje:
"... Siyabonga ukubambisana eside, kodwa sicela ubuyekeze nezintela phansi. Esikhathini shopping centre eseduze izikhala ezifanayo endaweni efanayo kuyakuba ngentengo 20% ngaphansana izimo ezifanayo. Patency emhlabeni esidayisa kuyafana .... "
Ungalokothi ukhohlwe ukuthi luvimbele ukwanda yokukhokha zokuqashisela a kulula kakhulu. Cishe njengoba kuhlinzekwe isimo inkontileka ngaphansi lapho umqashisi unelungelo kubuketa izinga sokuqasha 1 minyaka yonke, bonke bephelele noma njalo ezinyangeni eziyisithupha. Isiqashi usesimweni esinjalo, ungathuli, futhi zaphetha umninindlu angenza isiphakamiso ukukhulisa, bhala incwadi yakho siqu "okulusizi."
Incwadi Sample ukuze nezintela eziphansi kulokhu kungase kubonakale ngendlela elandelayo:
"... Ngenxa yesimo esinzima sezomnotho ezweni nokuncipha nakwentiwa akucele ukuba sinciphise iqashwe ngo-10%. Lokho kwenza nathi bambiso siqhubeke ngokugcwele futhi ngesikhathi esifanele ukuhambisana nayo yonke imigomo yenkontileka ... ".
Kahle kahle, amasampula izinhlamvu umninindlu ukunciphisa iqashwe kungcono ucacise iphesenti inkudlwana kunaleyo ukuthi umnikazi Igumbi unelungelo ucacise esicelweni sokwanda.
Uma isazoba ukungena esivumelwaneni sokuqasha ke ukuthi maduze ngeke isampula lokubhala ukunciphisa nezintela, sifunda ukuthi umnikazi afisa egumbini.
Ngokuvamile, afuna ukuqasha izinyanga ezimbalwa. Kulokhu, ukuthola isiqinisekiso sokuthi ngesikhathi, isibonelo, eminyakeni engu-2 ubudala, yena ngeke uhlaziywe. Mhlawumbe abanikazi izakhiwo engafuni njalo ufune abaqashi entsha, ngakho-ke, ukuqinisekisa kuye ukuthi ngeke ngisuke endaweni indawo iminyaka 2-3 noma ngaphezulu.
Uma ekamelweni alikho indlela engcono kakhulu, ngakho angabi ngokuhamba kwesikhathi incwadi isampula ukwehlisa nezintela noma zidinga ukulungisa, ukuxoxisana umninindlu ukubamba okwakhe, kodwa inxeshezelwa izimali. Yiqiniso, ukufuna ayisiqinisekiso sokuthi kulokhu ngeke elibuyekeziwe intengo inkontileka, isibonelo, ngenxa yokuthi ukuthi umnikazi wamagceke uzothola inalienable ngcono izindawo, okuyinto ngisho kulowo mhlangano ngeke naemschika umnikazi.
Lo mqashi wabe kufanele babe abantu abalindele okukhulu kuya umqashisi nokuqhuba izingxoxo ezinzima. Ngakho, ukuntuleka yokupaka noma i-Internet - a lokususa omkhulu. Uma amafasitela zitholakala odongeni esakhiweni esingaphesheya, ke kungabonakala nakulokho njengoba isici nokuncipha ekutholeni izindleko iqashwe. Ngakho-ke arendatelyu izincwadi ukuze iqashwe ephansi, izibonelo esiye enikezwa esihlokweni, kumele kube izidingo ezinengqondo futhi ngokucacile express.
Nesibopho emphakathini ibhizinisi - indlela ukuze ukuzinza
Ibha esephepheni kwezimpahla kanye nemikhiqizo
Siyakuhalalisela abaqotho futhi bejabule umculo uthisha!
Iphethini Summer izingubo: thunga ngokushesha futhi kalula
Medicine 'Fluimucil'. Yokusetshenziswa
Safe Mode ku-tablet: indlela cisha futhi kumele uzisebenzise kanjani leli thuba elihle kangaka?